တရုတ် တစ်ခါသုံး စက္ကူ ညစာ ပန်းကန် ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ရောင်းချသူများ | Chang Liang
မော်ဒယ် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ အချောအရွယ်အစား ယူနစ်စျေးနှုန်း $ MOQ
၇ လက်မ 200-350 ဂရမ် 18cm ၀.၀၂-၀.၀၆ 50000
၈ လက်မ 250-350 ဂရမ် 20.5 စင်တီမီတာ ၀.၀၃-၀.၀၆ 50000
၉လက်မ 300-400 ဂရမ် 23cm ၀.၀၃-၀.၁ 50000
၁၀ လက်မ 350-400 ဂရမ် 25.5 စင်တီမီတာ ၀.၀၄-၀.၁၅ 50000
၁၁ လက်မ 400-560 ဂရမ် 28cm ၀.၀၅-၀.၂ 50000
12 လက်မ 400-560 ဂရမ် 30.5 စင်တီမီတာ ၀.၀၅-၀.၂ 50000
200g မှ 500g ကြား အရည်အသွေးမြင့် အစားအစာတန်း စက္ကူကို အသုံးပြု၍ သင်လိုချင်သော ပုံစံနှင့် အရောင်ကို ပုံနှိပ်နိုင်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်: ၁။ ပုံနှိပ်စက်ကို ပုံနှိပ်စာရွက်အတိုင်း ပြုလုပ်ပါ၊ လိုအပ်သော အရွယ်အစားကို ဖြတ်ပါ၊ ပုံနှိပ်ပုံစံကို ဖြတ်ကာ ပုံနှိပ်နမူနာ၏ အရောင်ကို ပြီးမြောက်အောင် ပုံနှိပ်ပါ။ 2. သင့်လိုအပ်ချက်အရ မျက်နှာပြင်ကုသမှုကို ပြုလုပ်ပါ။ 3. ပုံနှိပ်စာရွက်စာတမ်းများအရ၊ သေးငယ်သောအပိုင်းအစများကို ပြီးမြောက်စေရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဓားကို သေစေပါ။ 4. လိုချင်သောထုတ်ကုန်ဖြစ်အောင် ပုံသွင်းစက်ထဲသို့ ထုတ်ကုန်သေးသေးလေးများထည့်ပါ။ 5. သင့်လိုအပ်ချက်အရ သက်ဆိုင်ရာထုပ်ပိုးပါ။
1.အလင်းအရည်အသွေး၊ ကွဲအက်မှုကိုဆန့်ကျင်။ ဖန်ပုလင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စက္ကူပြားများသည် ပေါ့ပါးပြီး ကွဲနိုင်ခြေနည်းပါသည်။
2.Low cost; အလင်းအရည်အသွေးသည် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေနိုင်သည်။ ပါတီပစ္စည်းများအတွက် ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှု။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးသည့် ပစ္စည်း၊ ဖန်ခွက်ပန်းကန်ခွက်ယောက်များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာသည်။
3. ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှု; ပုံနှိပ်အလှဆင်ခြင်းသည် အောင်မြင်ရန်လွယ်ကူသည်၊ လူသိရှင်ကြားအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ အရောင်းမြှင့်တင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရိုးသားသော စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်လိုအပ်သောပစ္စည်း၏အလေးချိန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ ထောင့်ဖြတ်မည်မဟုတ်ပါ။ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး- ပုံပျက်လွယ်ခြင်း၊ အက်ကွဲရန်မလွယ်ကူခြင်း၊ ဆီယိုစိမ့်ခြင်း ရေယိုစိမ့်ခြင်းနှင့် အခြားပြဿနာများ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ အရည်အသွေးအဖွဲ့ရှိသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လို့ ဈေးနှုန်းလည်း ကြီးကြီးမားမား အားသာချက်ရှိပါတယ်။ လာပါ၊ သင့်အော်ဒါများ လိုအပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အရည်အသွေးကို လိုအပ်ပါသည်။ ပြီးတော့ ငါတို့ ဇာတ်လမ်းက စပြီး အောင်ပွဲခံဖို့ အတူတူ လုပ်နေကြတာ။
ယခင်- ခရစ်စမတ် စက္ကူ ညစာ ပန်းကန်များ
နောက်တစ်ခု: ပါတီ တစ်ခါသုံး စက္ကူပြားများ